“မိနျးကလေးခငျြးကွိုကျနသေူတဈယောကျအဖွဈ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ခပြွလိုကျတဲ့ ထကျအဉ်ဇလီ” - The Moon MM
ယှဉျပွိုငျမှုပွငျးထနျတဲ့မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ ဆနျခါတငျ(၁၁)ယောကျစာရငျးဝငျပွီး ပရိသတျရဲ့အခဈြကိုသိမျးပိုကျခဲ့သူကတော့ ထကျအဉ်ဇလီပဲဖွဈပါတယျ။ပွိုငျပှဲစဉျတဈလြှောကျလုံးမှာ တကျကွှလနျးဆနျးတဲ့ Performance တှနေဲ့ယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ ငယျစဉျကတညျးက ကှဲကှာခဲ့တဲ့ဖခငျဖွဈသူနဲ့လညျး ပွိုငျပှဲစဉျအတှငျးမှာပွနျလညျဆုံတှခေဲ့ပွီး ပရိသတျတှကေိုဝမျးသာပြျောရှငျစခေဲ့သူပါ။
ထကျအဉ်ဇလီကတော့ ကယားသှေးနှောတဲ့ တိုငျးရငျးသူလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ ငယျစဉျကတညျးကမိဘတှနေဲ့အတူမနခေဲ့ရဘဲ အဘှားဖွဈသူနဲ့အတူ ဘဝကိုရုနျးကနျခဲ့ရသူဖွဈတာကွောငျ့ စိတျဓာတျမာကွောပွီး ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာသူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ပွိုငျပှဲကွီးပွီးကတညျးက ဖြျောဖွပှေဲတှဆေကျတိုကျသှားရောကျသီဆိုနရေသူ ထကျအဉ်ဇလီကတော့ ဒီနေ့ ခဈြသူမြားနလေ့ေးမှာ သူခဈြရတဲ့ခဈြသူကောငျမလေးနဲ့ရိုကျကူးထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို ပရိသတျတှကေိုခပြွလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။
“အေးဆေးဘဲ.. ဘာကွညျ့နတောလဲ.. အားကမြခံ အခုပဲ Mention ချေါပွီး ကိုယျ့အခငျြးခငျြးပဲ Ship လိုကျတော့လေ.. Happy Valentine’s Day” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ရိုမနျ့တဈဆနျဆနျရိုကျကူးထားတဲ့ပုံလေးတှနေဲ့အတူ မြှဝပေေးခဲ့တာပါ။ပရိသတျကွီးရေ ထကျအဉ်ဇလီကတော့ သူ့ရဲ့အခဈြရေးကိုခပြွထားခွငျးမရှိသေးဘဲ ဒီနမှေ့ာတော့ မိနျးကလေးခငျြးကွိုကျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈကွောငျး ပုံလေးတှနေဲ့ခပြွလိုကျတာလား.. တမငျစနောကျနတောလားဆိုတာတော့ စဉျးစားစရာပါပဲနျော။
Source – Htet Inzali,CRD-Cele gabar
“မိန်းကလေးချင်းကြိုက်နေသူတစ်ယောက်အဖြစ် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ချပြလိုက်တဲ့ ထက်အဉ္ဇလီ”
ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ဆန်ခါတင်(၁၁)ယောက်စာရင်းဝင်ပြီး ပရိသတ်ရဲ့အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သူကတော့ ထက်အဉ္ဇလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ Performance တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကွဲကွာခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့လည်း ပြိုင်ပွဲစဉ်အတွင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်စေခဲ့သူပါ။
ထက်အဉ္ဇလီကတော့ ကယားသွေးနှောတဲ့ တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေနဲ့အတူမနေခဲ့ရဘဲ အဘွားဖြစ်သူနဲ့အတူ ဘဝကိုရုန်းကန်ခဲ့ရသူဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဓာတ်မာကြောပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးကတည်းက ဖျော်ဖြေပွဲတွေဆက်တိုက်သွားရောက်သီဆိုနေရသူ ထက်အဉ္ဇလီကတော့ ဒီနေ့ ချစ်သူများနေ့လေးမှာ သူချစ်ရတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေကိုချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“အေးဆေးဘဲ.. ဘာကြည့်နေတာလဲ.. အားကျမခံ အခုပဲ Mention ခေါ်ပြီး ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲ Ship လိုက်တော့လေ.. Happy Valentine’s Day” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ မျှဝေပေးခဲ့တာပါ။ပရိသတ်ကြီးရေ ထက်အဉ္ဇလီကတော့ သူ့ရဲ့အချစ်ရေးကိုချပြထားခြင်းမရှိသေးဘဲ ဒီနေ့မှာတော့ မိန်းကလေးချင်းကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပုံလေးတွေနဲ့ချပြလိုက်တာလား.. တမင်စနောက်နေတာလားဆိုတာတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲနော်။